तिहारमा भारतबाट फूल नल्याइने – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. तिहारमा भारतबाट फूल नल्याइने – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
बजारमा सयपत्री फूलको मागमा कमी र स्वदेशी उत्पादन राम्रो रहेकाले यस वर्षको तिहारमा छिमेकी मुलुक भारतबाट फूल आयात नहुने भएको छ। मागअनुरुप उत्पादन भएकाले आयातित फूलको आवश्यक नहुने बताइएको छ। गत वर्ष तिहारमा २५ लाख सयपत्री माला खपत भएको थियो। यस वर्षको तिहारमा भने १५ लाख मालाको मात्र माग हुने अनुमान गरिएको छ।
तिहारमा सयपत्री, मखमली र गोदावरीको माग बढी हुने भएपनि सयपत्री मात्रै भारतबाट ल्याउने गरिएको थियो। गत वर्षको तिहारमा २५ लाख माला खपत हुँदा तीन लाख माला भारतबाट ल्याइएको थियो।
फूलले बजार नपाए पनि तिहारमा भने स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने छ। व्यवसायीहरुले यस वर्षको पात्रो हेरेर व्यावसायिकरूपमा फूल लगाएका हुनाले उत्पादन राम्रो रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजू श्रेष्ठले बताए। ‘यस वर्ष भने बजारमा माग कमी भएकाले कारोवारमा केही कमी हुन्छ,’ उनले भने।
यस वर्ष समय समयमा पानी परिरहेकाले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लासहित तराईका केही जिल्लामा फूलको राम्रो उत्पादन भएको छ। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकामा नै सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत मालाको माग छ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको November 1, 2020 November 23, 2020 382 Viewed